Masayrka iyo Dhibaatooyinka ka Dhasha. | Hargeysa World~Herald
Masayrka iyo Dhibaatooyinka ka Dhasha.
UncategorizedMasayrka iyo Dhibaatooyinka ka Dhasha.
Naadiya ayaa sheegtay in dumarka badanadaa ay shaqadeeda ku qaabisho ay tabanayaan dhibaatooyin dhanka qoyska ah oo la xirrira dhanka masayrka ka dib mara gabadha uu seygeeda haweenay kale la guursado.
Iyada oo ka hadlaysa qaar ka mid ah arrimaha ay sida joogtada ah ula kulanto ayey tiri: “Gabadh waxaa jirtay uu ninkeeda ku soo guursaday Afrika iyada oo joogta Sweden ma aysan ogayn ka dib waxay go’aansatay inay ka tagto balse waxa ay ii sheegtay markii ay ninkeeda u sheegtay inay go’aansaday inay ka tagto uu ugu hanjabay inuu muuqaal ka duubay oo uu ku dacweyn doono dowladda si ay ilmaha asaga u siiyaan dacwad badan ka dib waa ay kala tageen waxaana halkaas ku burburay qoyskii.”
Sheikha oo ka hadlaya arrimaha masayrka la xirriira ee la sheegay inay badanaaa horseedaan buburka qoyska ayaa yiri: “Masayrka ama hinaasha wax jira weeyaan kuma sinna oo kaliye xaga guurka, tusaale ahaan ilmaha marka ay yaryihiin waxyaalaha ay ku ciyaarayaan inay cid kale wadaago wey ka maseyraan.”
“Marka maadama ay haweenayda ninkeeda jeceshahay waxay isku dayaysaa in ninkaas aan lala wadaagin oo ay ka hinaasto inay haweenay kale booska soo gasho balse shareecada Islaamka iyada oo og masaladaan ayey jidaysay in ninka uu haweenay kale guursan karo iyada oo masayrka ka eegtay inuu yahay in la xaliyo.”
“Ragga Soomaalida waa inay gartaan haddii ay haweenayda masayrto inay ku dadaalaan sidii ay ku dajin lahaayeen oo looga baaqsan karo burburka qoyska waxaa jiray dhaqan ah in marka ay dumarka masayraan la siiyo masayr tir.”
Sheikh Yussuf ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha ugu badan ee isfaham waaga keena ay ka mid tahay in xilliga shukaansiga ama haasaawaha uu ninka gabadha u sheego been badan taasi oo sababta ugu damabayn uu qoyskaas burburo marka ay runta soo baxdo.
“Sida la ogyahay furiinka ragga ayaa loo dhiibay balse waxaa suuragal ah inay si khaldan u isticmaalaan awooddaasi la siiyay taasi oo khilaafsan shareecada Islaamka, 20-kii sano ee la soo dhaafay waxaa I soo maray kiisas badan oo arrimahaan la xiriira oo aad u murugo badan.” Ayuu raaciyay Sheikh Yussuf.
SOURCE BBC SOMALI NEWS.COM